३८ जिल्लामा संक्रमण, उच्च जोखिममा काठमाडौं उपत्यका | Kendrabindu Nepal Online News
३८ जिल्लामा संक्रमण, उच्च जोखिममा काठमाडौं उपत्यका
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०७:५२
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि संक्रमितहरू लुकिछिपी उपत्यका भित्रिएका छन् । यसरी आएका संक्रमितमध्ये २४ जनाभन्दा बढी आइसोलेसनमा उपचाररत छन् ।
उपत्यका बाहिर ठेगाना बताएका ती संक्रमितहरू काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरमा डेरामा बसेको पाइएको छ। को व्यक्तिबाट काठमाडौंमा कसरी संक्रमण फैलिरहेको छ भन्ने यकिन गर्न नै कठिन भइरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का उच्च अधिकारीले बताए । १ जेठदेखि नै उपत्यकामा बस्नेमा संक्रमण बढी देखा पर्न थालेको हो ।
६ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ललितपुर ठेगाना दिएर एकजनालाई संक्रमण भएको अपुरो जानकारी दियो । ती व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत थिए । उनको घर उपत्यका बाहिर भए पनि मन्त्रालयले ललितपुर ठेगाना भएको बतायो । उनको स्थायी ठेगाना पहाडी जिल्ला हो।
६ जेठमा नयाँ संक्रमित थपिएको जानकारी दिँदै लमजुङ ठेगाना भएका व्यक्ति उल्लेख गरियो । उनी पनि काठमाडौंमा बस्दै आएको पाइएको छ । १ जेठमा संक्रमित भएको पुष्टि भएका दुई बालबालिका पनि उपत्यकाबाहिर घर भए पनि काठमाडौं आएको बेला पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट टे«सिङको अगुवाई गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार परीक्षण एवं संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट टे«सिङको बेला अधुरो विवरण राख्ने गरेकोले समस्या बढेको बताउँछन् । ‘यस खालको लापरवाहीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र संक्रमणको जोखिम झन् बढ्छ’, डा. प्याकुरेलले भने।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रवक्ता कमला ओली, मन्त्रालयबाट प्रवाह गरिने सूचनामा संक्रमित वा मृतक व्यक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको ठेगानाले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको बताउँछिन् । ‘स्थायी ठेगाना र अहिले बसोबास गरिरहेको स्थान वा संक्रमण हुँदाको स्थान फरक/फरक हुन सक्दछ। एउटा मात्र स्थानका बारेमा उल्लेख गर्दा सर्वसाधारणमा अन्यौल भएको पाइएको छ’, उनले भनिन्।
आयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्दा संक्रमण हुँदाको बखत बसोबास गरेको स्थान र स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गर्न आदेश दिएको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई आयोगले मंगलबार आदेश समेत दिएको छ।
मन्त्रालयले यस बारे विस्तृत जानकारी नगराए पनि स्थानीय निकायहरूले धमाधम सिल गर्न गर्न थालेका छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका—१२ बस्ने एक महिलामा स्वाब परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएपछि तीन वडा सिल गरिएको छ। वडाअध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईका अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तेन्जिङ चोकदेखि फैका चोकसम्म सिल गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही दिन यता दुई हजार २ सय ३६ वटा आरडीटी र एक हजार १९ वटा पीसीआर विधिबाट विभिन्न क्षेत्र र केन्द्रमा फोकस गरेर नमूना संकलन र परीक्षण गरिएको छ। ‘सबैजनाको पीसीआरको नतिजा आइसकेको छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने।
हालसम्म ३८ जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। मुलुकभर पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षण संख्या हालसम्म ३८ हजार ७ सय ३६ छ। आरडीटी विधिबाट ७८ हजार ६ सय ९५ पुगेको छ। ४ सय ५३ संक्रमित छन्। तीमध्ये ३८३ पुरुष र ७० जना महिला छन्। ४९ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमितमध्ये तीन जनाको मृत्यु भएको छ।अन्नपूर्णबाट
३८ जिल्लामा संक्रमण, covid19, उच्च जोखिममा काठमाडौं उपत्यका
Prevबन्दाबन्दीको समयमा समेत स्मार्ट कार्डको छपाइ जारी, एक लाख ४० हजार कार्ड छापिए
सीमा विवाद : ‘भारतसँग वार्ता गर्न तयार भएर बसेका छौं’ – परराष्ट्रमन्त्रीNext